အဆိပ်ပင်(သို့မဟုတ်)ကြံ့ဖွတ်များသို့ … | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အဆိပ်ပင်(သို့မဟုတ်)ကြံ့ဖွတ်များသို့ …
Posted by myohtat on Jan 26, 2012 in Copy/Paste | 10 comments
ကျုပ်က .. နိုင်ငံရေးလည်းမလုပ်ဘူး … ဘယ်ပါတီမှလည်းမပါဘူး … ဒါပေမဲ့ ပြောစရာရှိတာလေးတွေတော့ ပြောရအုံးမယ် …
တချို့သော(Post)တွေမှာ ဒေါ်စုနဲ့ပါတ်သက်ပြီး မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းစော်ကားထားတာတွေဖတ်ရပါတယ် ..
အဓိကအချက်က နိုင်ငံခြားသားကိုယူလို့တဲ့ … မင်းတို့တွေကိုပြောချင်ပါတယ် .. လူဟာလူဘဲလေကွာ ..
ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းရင် ဘယ်နိုင်ငံသားဘဲဖြစ်ဖြစ်လေးစားကြရမှာဘဲ … ဒေါ်စုယောက်ျားဟာ နိုင်ငံခြားသား
တဦးဖြစ်တာကလွဲလို့ ဘာပြစ်ချက်တွေရှိနေသေးလို့လဲ … မင်းတို့ကောင်တွေထက် ပညာတတ်တယ် သိက္ခာသမာဓိ
ရှိတယ် .. နိုင်ငံခြားသားတွေမှန်သမျှ မကောင်းဘူးလို့ဆိုချင်တာလား … အဲဒါဆိုရင်တော့ သူတို့တွေ တီထွင်ထားတဲ့
နည်းပညာတွေပါ မင်းတို့မသုံးကြနဲ့ပေါ့ … ဒို့နိုင်ငံကို နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်တွေသိမ်းပိုက်ခဲ့သလို .. ဒို့မြန်မာတွေလည်း
ယိုးဒယားနိုင်ငံကိုသိမ်းခဲ့ဘူးတာဘဲ … သမိုင်းကိုပြန်လှန်ရင် ဒါတွေကဖြစ်ခဲ့ပြီးသားတွေပါ … ယောက်ျားနဲ့မိန်းမယူကြတာ
နိုင်ငံရေးနဲ့ဆိုင်လို့လား … ကြံ့ဖွတ်ကိုမဲထည့်ကြပါ .. လမ်းတွေခင်းပေးမယ် မီးတွေရအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးမဲဆွယ်တယ် …
မင်းတို့စိတ်ဓါတ်တွေ ဘယ်လောက်အောက်တမ်းကျတယ်ဆိုတာဖေါ်ပြလိုက်တာဘဲ .. အရင်ထဲကလုပ်ပေးနိုင်ရင်လုပ်ပေးသင့်တာပေါ့ ..
မဲထည့်မှလုပ်ပေးမှာတဲ့ … ဒီလိုအကျင့်ရှိတဲ့ကောင်တွေ ငါတို့နိုင်ငံမှာရှိနေတာ တော်တော်လေးကိုရှက်ဖို့ကောင်းတယ် ..
ဒေါ်စုကို အဖွားအိုတယောက်က လက်အုပ်ချီပြီးဂါရ၀ပြုနေတာကိုလည်း … ဒေါ်စုကဘဲ အတင်းအကျပ်လက်အုပ်ချီပြီး ရှိခိုးခိုင်းသလို
လျှောက်ရေးထားတယ် .. အဲဒီအဖွားအရွယ်ကိုကြည့်ရင် ခေတ်ပေါင်းများစွာကို ကျော်ဖြတ်လာဘူးတဲ့ အရွယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ် ..
အဖွားအိုက ဘယ်သူတွေကလေးစားထိုက်တယ် ဘယ်သူတွေကယုတ်မာရက်စက်မိုက်ရိုင်းကြတယ်ဆိုတာ ညွှန်ပြနေတာပါ ..
ကျုပ် မှတ်မိတာလေး တခုရှိသေးတယ် .. နယ်မြို့ တမြို့မှာ စစ်တပ်ကဗိုလ်ချုပ်တယောက်လာတုန်းက အဖြစ်အပျက်လေးပါ ..
ဗိုလ်ချုပ်လာမယ်ဆိုတော့ ကားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ကားတွေ လမ်းကြားတွေထဲကိုမောင်းသွင်းခိုင်း … လမ်းပေါ်မှာဘာမှမရှိအောင်
ကိုယ်ရွှေရဲတွေနဲ့ ကြံ့ဖွတ်တွေ အလုပ်ရှုပ်နေကြတာ မမောနိုင် မပမ်းနိုင်ပါဘဲ .. အဲဒီ အချိန်မှာ ခွေး လေး တကောင်က ကားလမ်းကို
ဖြတ်ပြီးကူးတယ် … ကြံ့ဖွတ်တွေ လိုက်ရိုက်ကြတာများ မြင်မကောင်းဘူး .. ဘာမှ မဟုတ်တဲ့ ခွေးဝဲစားလေးတောင် အလွတ်မပေး
ကြဘူး … ဒေါ်ကြီး တယောက်ကပြောသွားတာ ကျုပ်ကြားလိုက်တာတော့ … အဲဒါ ခွေးမောင်းတဲ့ အဖွဲ့လားတဲ့ … မင်းတို့တွေ ဘာမှ
အားမငယ်ကြနဲ့ သွေးရူးသွေးတမ်းတွေလည်းမဖြစ်ကြနဲ့ … မင်းတို့အဖွဲ့ကို (ခွေးမောင်းတဲ့ အဖွဲ့) ဖွဲ့စည်းပေးမယ် …
နောက်ဆုံးပြောချင်တာက မတူရင်မတုနဲ့ မင်းတို့အားလုံး မင်းတို့ ဆရာကြီးတွေပါ ဒေါ်စုထမီဖြားတောင်မှီတဲ့သူမရှိကြဘူး …
မင်းတို့စိတ်ဓါတ် မင်းတို့ရည်ရွယ်ချက် အားလုံးကို ပြည်သူတွေလက်မခံတော့ဘူး … အဲဒါကောမင်းတို့ သိလား …
ပြည်သူတယောက် အနေနဲ့ ပြောတာပါ … ကျေနပ်ကြတယ်နော် ….
မကြေနပ်ကြလို့ ဘာမှ လာမ မန့်တာလို့ ယူဆရမယ်ထင်တယ်။
ကိုမျိုးထက်ပြောတာ မလွန်လောက်ပါဘူး။ မှန်တာတွေမို့လေ။
( ကျနော် ကြေနပ်ပါတယ် )
ပြောသေးတယ်။ ကြံဖွတ်တွေက ” အဟိတ်တိရိစ္ဆာန်ကိုအလံမှာထည့်ပြီးထား တဲ့ကိုးကွယ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတဲ့။ အဟိတ်တိရိစ္ဆာန်ကိုရှေ့တန်းတင်နေတဲ့သူတွေဟာ အဟိတ်တိရိစ္ဆာန်လောက်မှမမြတ်ဘူး” တဲ့။ ကျွန်မလေရေးတဲ့သူကိုသိလို့ကတော့နုတ်နုတ်စဉ်းပြစ်ချင်တာ။ သူတို့ကကောလို့မေးမေးပြီးတော့။ သူတို့ကကောအဟိတ်တိရိစ္ဆာန်ကိုကိုးကွယ်နေတာ မဟုတ်ဘူးလားလို့။ ခွေးခြင်္သေ့တွေကများသူခိုးကလူပြန်ဟစ်နေတာ။ ငါပြောရပြီးရောမစဉ်းစားပဲ ဦးဏှောက်မရှိပြောနေတာ။
သူတို့က ကြံ့ရော ဖွတ်ရော ခြင်္သေ့ရော
ခင်ဗျားတို့ မကြောက်ဖူးလား ။
၂၀၀၉ တုန်းကစက်မှု(၂)မှာ ဒုအလုပ်ရုံစိတ်မှူးအဖြစ်လုပ်ဘူးတယ်..
အဲဒါ ကွန်ပြူတာသင်တန်း တက်ချင်ရင် အသင်းဝင်ရမယ်ဆိုလို့ ကျွန်တော်နဲ့ နောက်တစ်ယောက်
ကျန်ခဲ့တယ် အဖြေကတော့ ကြံ့ဖွတ်အသင်းထဲမ၀င်လို့ပါ….
ကျတ်ဖွတ်ပါတီ ဟာ ဂျပိုး သူခိုး လူလေ လူလွင့်တွေ အခွင့်အရေးသမား တွေ အခြေပြုတဲ့ ပါတီဖြစ်လို့
သူတို့ပါတီကို မဲမပေးရင် ဖွံဖြိုးရေးလုပ်ငန်း လုပ်မပေးဘူးပြောပြီး မဲထည့်ခိုင်းတာ ဆိုတော့ မဲအတင်းဝယ်တာ
နဲ့အတူတူ ပါဘဲ စိတ်ဓါတ်ညံ့ ဖျင်းတာ လုပ်ယူတာလားလို့တောင်ထင်စရာ ဖြစ်နေတယ်
I’m fully support for Ko myohtat posted. All are truth.
ဒင်းလေးတွေက “ကျမတ်ို့ဂ ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ ဖြိုးရေးအသင်းဝင်တွေရှင့်” ဆိုပီး
ကြံ့ဖွတ်ကတ်လေးထုတ်ပြသဒဲ့ ….. ဟဲဟဲ ;)
မှောင်တော်ကင်း ပြောတာ မဟုတ်ဘူးနော် …..
ဒီလိုတော့ ပြောထားတာရှိတယ် …
”ပါတီဝင်များအနေနဲ့ ပြည်သူသာအမိ၊ ပြည်သူသာအဖလို့ ခံယူပြီး ပြည်သူကို ဘက်ပေါင်းစုံကနေ နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ ကူညီဖြည့်ဆည်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ ပြောင်းလဲနေမှုများကိုလည်း ပြောင်းလဲလို့ ကောင်းတာပဲဖြစ်ရမယ်၊ကောင်းတာဖြစ်ဖို့ပြောင်းလဲတာပဲ ဖြစ်ရမယ်” ဟုလည်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ပါတီဝင်များအနေနဲ့ ပြည်သူသာအမိ၊ ပြည်သူသာအဖလို့ ခံယူပြီး ပြည်သူကိုဘက်ပေါင်းစုံကနေ နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ ကူညီဖြည့်ဆည်းပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ ပြောင်းလဲနေမှုများကိုလည်း ပြောင်းလဲလို့ ကောင်းတာပဲဖြစ်ရမယ်၊ ကောင်းတာဖြစ်ဖို့ ပြောင်းလဲတာ ပဲဖြစ်ရမယ် . . .
ပါတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးဌေးဦးက ပြည်တွင်းမီဒီယာများ၏ မေးမြန်းချက်များ အပေါ်တွင်လည်း ”ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေးအတွက် သီးခြားသုံးစရာမလိုပါဘူး။ ပြည်သူတွေကို ကူညီနေတာမှာလည်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ပဲ ရန်ပုံငွေတွေကို အသုံးပြုပါတယ်။ ပြည်သူအတွက် ကောင်းအောင်လုပ်ပေးရင် ပြည်သူတွေဆီက မဲရမှာပဲ။ ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ ပြည်သူ့အတွက် စွမ်းဆောင်နိုင်မှုပေါ် မူတည်ပါတယ်။ ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ရွေးချယ်ရာမှာလည်း ပြည်သူ့ အကျိုးဆောင်ရွက်မယ့်သူတွေကိုပဲ ရွေးချယ်သွားမှာပါ။ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရဖို့အတွက် တရားသောနည်းများဖြင့် အနိုင်ရရေးအတွက် ကြိုးစားသွားမှာပါ။ လက်ရှိမှာတော့ ပါတီ အင်အားတောင့်တင်းဖို့၊ လွှတ်တော်အင်အား တောင့်တင်းဖို့၊အစိုးရ တောင့်တင်းဖို့ အဓိကထား ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ လွှတ်တော်အင်အားတောင့်တင်းဖို့ ကိုယ့်ပါတီက ကိုယ်စားလှယ်တွေ များဖို့လိုပါတယ်။ အစည်းအဝေးမှာတော့ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ် တွေချမှတ်မယ်၊ အားနည်းချက်တွေ ပြုပြင်မယ်၊ ရှေ့ကိုဆောင်ရွက် မယ့်ကိစ္စတွေကိုလည်း ဆွေးနွေးမယ်။ နောက်ပြီးတော့ စည်းကမ်းပျက်တဲ့ သူတွေရှိခဲ့ရင် ထုတ်ပယ်အရေးယူသွားမယ်”ဟု ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲများတွင် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သော လစ်လပ် မဲဆန္ဒနယ် ၄၈ နေရာအားလုံးတွင် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
by: EMG (Eleven Media Group)
အင်း မစ္စတာအိုဘားမား လဲ အမေရိကန်ဖွားတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးလို့ ကြားဖူးတယ်ဗျ။